Squid amin'ny saosy amerikana - Recipe Thermomix | ThermoRecipes
TRONDRO48 minitraOlona 4
Indray maraina talohan'ny niasako dia namakivaky ireo vatasarihana vatasarihana aho cozero. Ho avy tsy ho ela ny toetr'andro ary "hiteny mafy" ahy ny vadiko noho ny antony ... noho ny tsy fananako lavaka ao anaty vata fampangatsiahana (ary manana roa aho) hahafahako manana ireo gilasy hafahafa mandritra ny sakafo faran'ny herinandro.
Ka nitady hahita izay mety ho azoko hisakafo hariva aho, ka hamela toerana ho an'ireo menaka gilasy. Teo ambanin'ny vatasarihana vatam-paty no nahitako kitapo sakaza iray ary namela azy io tsy ho lany maina. Nandritra ny tontolo andro dia nieritreritra ny sasany aho fomba fahandro izay ananako ho an'ny vatan'ny fahatsiarovana ho an'ireo angisy mandra-pahitako azy.
Ireto angisy ao anaty saosy ireto dia voaomana miaraka brandy Ary nanana tavoahangy kely avy amin'ny Krismasy sasany fotsiny aho, dia nitady izany aho. Mora tokoa ny manomana azy ireo, ao anatin'ny telo ampahefatry ny adiny iray monja dia efa misy squid matsiro vonona hisakafo hariva isika. Izy ireo dia azo aroso amin'ny vary fotsy ho haingo na amin'ny salady manan-karena toa ahy.
1 Squid amin'ny salsa amerikana
Azonao atao ihany koa ny manamboatra an'io fomba fahandro io amin'ny squid mangatsiaka.
Fotoana hiketrehana: 48M
Fotoana manontolo: 48M
Sitraka 750 g
Tongolo 250 g
50 g ny menaka oliva virijina
Voatabia voajanahary 200 g
1/2 goba stock trondro
200 g marika
Siramamy kely iray
Ataovy anaty efamira ny tongolo, ny jirofo vita amin'ny tongolo lay sy ny menaka ao anaty vera. Izahay dia nandrovitra 7 segondra, hafainganam-pandeha 5.
Izahay dia mampidina ny sisa tavela amin'ny rindrina amin'ny spatula sy programa 8 minitra, maripana varoma, fihodina ankavia, hafainganam-pandrefesana.
Arotsaho ny voatabia, ny siramamy avy amin'ny siramamy ary ny sira. Izahay dia manao fandaharana 10 minitra, maripana varoma, fihodina ankavia, hafainganam-pandrefesana.
Ampio ny angisy, ny dipoavatra ary ny goba amin'ny stock. Izahay dia manao fandaharana 4 minitra, maripana varoma, fihodina ankavia, hafainganam-pandrefesana.
Avy eo izahay dia manampy ny marika sy ny programa 25 minitra, maripana varoma, fihodina ankavia, hafainganam-pandrefesana.
Rehefa vita dia manolotra vary fotsy ho fanaingoana izahay.
Fanazavana fanampiny - Gilasy 9 mahafinaritra indrindra amin'ity fahavaratra ity / Resipeo 9 misy angisy vita amin'ny Thermomix®
Mitadiava fomba fahandro hafa momba ny: Celiac, Tsotra, Tsy mahazaka laktose, Tsy mahazaka atody, Latsaky ny adiny 1, TRONDRO, Saosy
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Thermorecetas » Resipeo thermomix » TRONDRO » Squid amin'ny salsa amerikana
Faly tokoa ianao nanome ny zanako lahy tamin'ity fomba fahandro ity, io no iray amin'ireo lovia ankafiziny. Hiezaka aho raha vantany vao entin'izy ireo amiko ilay milina avy amin'ny serivisy teknika.
Araka ny itiavanao azy, tsy misy afaka miditra ao an-trano intsony. Misaotra anao.
Maria, matsiro izy ireo. Manantena aho fa hahomby amin'ity resipeo ity.
Elisa Romero Lopez dia hoy izy:
Tiako ny resinao, hosoratako izy mba hahavitana azy tsy ho ela! 🙂
Valiny tamin'i Elisa Romero López
Lazao aminay izay eritreritry ny fianakavianao, antenaiko fa tianao izany.
Salama, ahoana ny endriny? Te-hanontany aho aorian'ny fanorotoroana ny tongolo amin'ny thermomix 21 rehefa miteny ianao fa ny sifotra varoma dia miverina sotro dia tsy maintsy apetrako ny lolo sy ilay mari-pana mitovy amin'ny varoma ary ny hafainganana 1 misaotra ………………… ………
Eny, Sandra. Napetrakao ny lolo, ny mari-pana sy ny hafainganana 1 ihany, izay ny miadana indrindra izay ananan'ny TM-21.
mary s. rofia GC dia hoy izy:
Endrey ny hatsaran'izy ireo! Tsy tiako ireo boaty fanomanana ireo, zavatra an-trano kokoa aho, koa ataoko amin'ity herinandro ity ary holazaiko anao. Misaotra betsaka anao amin'ny resipeo. Oroka
Mamaly an'i Maria s. rofia GC
Maria, momba anao aho. Tsy miresaka momba ny kapoaka mihitsy aho, izay rehetra mety hatao an-trano tsaratsara kokoa noho ny tsaratsara kokoa.
Salama, amin'ny dingana voalohany, lazainao amiko ve fa varamo izany, mitodika miankavia aho, hafainganam-pandeha varama, hafainganam-sotro ve, sa ahoana ny hafaingan'ny varamo?
Misaotra betsaka anao nampahafantatra ahy, dia io araka ny nolazainao. Hafainganana siny. Efa voahitsy.
Salama, izaho dia mpanaraka fatratra ny sakafonao, arahaba soa, fanontaniana iray fotsiny, ity fomba fahandro ity dia azo raisina ho ahy, miaraka amin'ny angisy koa, mitovy ve ny fotoana? -Thankssssss
Eny Paloma, tsy misy olana aminao manandrana angisy, dia nametraka fotoana mitovy ihany aho. Lazao aminay hoe ahoana izany.
Nataoko omaly hariva ity resipeo ity ary tian'ny fianakaviana manontolo izany.
Ho fanampin'izany, tena mahasalama izy io ary, miaraka amina vary, lovia tena feno.
Misaotra betsaka, Silvia.
Tena tsara, nataoko ny ampitson'ny nahitako azy, novidiako ilay hena vaovao, sarany lafo izy ireo ao amin'ny mercadona, nasiako marika kely kokoa, ao an-trano tsy misotro izahay, ary ilay ananako dia iray amin'ireo ireo mahery, fanomezana izay tsy fantatro izay handaniako azy. Misaotra betsaka indray, fa nanampy ahy isan'andro tamin'ireny karazan-tsakafo ireny aho, faly ny vadiko, io no saosy ankafiziny indrindra, efa nangataka ahy hamerina azy ireo indray izy, haha ​​hitako fa mividy brandy aho.
Heveriko fa raha i Antonia, amin'ny farany dia mila mividy marika bebe kokoa ianao. Faly aho fa tianao ilay izy !!
Pochi sy Mari Carmen dia hoy izy:
Nahomby tokoa izy ireo. Raha tokony apetraka voatabia voatoto dia nataonay voatabia efa nendasina (namboarina) izy ireo ary nampihena ny fotoana voatabia ho 4 '. Nividy azy ireo indray aho androany maraina tao Mercadona ary mbola hataoko indray fa amin'ity indray mitoraka ity dia hametraka kitapo misy ranomainty mitomany aho amin'ny farany.
Valiny tamin'i Pochi sy Mari Carmen
Hevitra tsara inona, momba ilay kitapo kely misy ranomainty. Lazao aminay ny niafaran'izy ireo.
Alicia perez dia hoy izy:
Salama Silvia, rehefa ao amin'ny resipeo dia tsy asehonao hoe olona firy ny fomba fahandro azy, azoko tsara fa ho an'ny 4 ??.
Araka ny ho hitanao, tsy afaka mitsahatra mijery ny pejinao aho, mahafinaritra izany ary hatramin'ny nahitako azy dia tsy afaka mitsahatra mijery ireo fomba fahandro aho, inona no biraoko ananako.
Valiny tamin'i Alicia Pérez
Eny, saika ny resipeo rehetra dia matetika ho an'ny olona efatra fa indraindray kosa misy ampahany kely aza.
NAHOANA LEHIBE INDRINDRA, MBOLA MITADY NY RESIPA IHANY, MANKASITRAKA AN'IZAO REHETRA REHETRA IZAO, MARO NO MIANATRA AMIN'NY PEJY ITY
Ao an-trano dia tianay koa ity fomba fahandro ity. Faly be aho fa tianao izy ireo.
Salama zazavavy, androany aho nanao ilay angisy ary nahagaga ahy fa matsiro izy ireo. Niala kely aho mba hametrahana marika be dia be nefa lazaiko aminao, gaga be aho. Misaotra, ianao no tsara indrindra.
Faly be aho fa tianao izany, ny tena marina dia mivoaka tena tsara ry zareo. Mirary ny soa indrindra
Salama raha tsy manana brandy aho afaka manampy divay fotsy misaotra
Tsy nanandrana an'i Teresa aho, ary ny marina dia i Brandy no manome izany fikitika manokana izany, fa raha manandrana divay fotsy ianao dia lazao anay hoe. Mirary ny soa indrindra
Tena tsara !!!!!
Toa tsara i K, hanomana azy ireo aho, manana fisalasalana aho, mba hahitana habetsahana bebe kokoa, hampitomboina avo roa heny ny fangaro nefa miaraka amin'izay? ... Misaotra, eske ao an-trano fa maro isika
Salama Sílvia, omaly no nanaovako ity recette ity ary tianay izy ireo, matsiro izy ireo ary tsy milaza zavatra aminao intsony ny saosy. Misaotra betsaka anao nizara tamin'ireto resipeo nahafinaritra anay ireto.
Mamaly an'i núria
Mº LUZ dia hoy izy:
SILVIA Aiza no ahafahako misoratra anarana amin'ny fandraisana THERMOMIX vaovao K Mamoaka vaovao aho miaraka amin'ny solosaina ary tsy fantatro ny fomba hanaovana izany. ARY HAHITAANAO ANAO XK AVACES RAHA HITAKO ANAO FA NY HAFA TSY HITADY ARY TSY FANTATRAO INONA NO HAHAZOANA HITADIAVINA ANAO. KISSES ARY MISAOTRA MANKASITRAKA ANAO
Valio amin'i Mº LUZ
Salama Mª Luz,
Rehefa miditra amin'ny pejy Thermoreceta ianao dia hahita, eo ankavanana, ny fizarana izay milaza ny fisoratana anarana amin'ny mailaka amin'ny litera mena. Mila mametraka ny mailakao fotsiny ianao ary tsindrio ny bokotra famandrihana.
Amin'ity fihetsika tsotra ity dia ho azonao, maimaimpoana tanteraka, ny vaovao rehetra amin'ny mailakao.
Salama Mº Luz,
Mba handraisana ireo resinay amin'ny alàlan'ny mailaka dia tokony hisoratra anarana eo amin'ny ilany ankavanan'ny tranonkala misy ny hoe "famandrihana amin'ny alàlan'ny mailaka". Avelanao aminay ny mailakao ary hahazo hafatra fampahavitrihana ianao. Ary rehefa manamafy izany mailaka izany ianao dia ho tonga isan'andro. Mandrapihaona eto!
Vao avy nahavita nanao ireo henan-doha ireo aho ary mila milaza fa matsiro. Heveriko fa io fomba fahandro io dia ho lasa iray amin'ny tiako indrindra.
Misaotra betsaka anao amin'ny resipeo. Mirary ny soa indrindra.
Tena tsara irery !! Ny marina dia miavaka tsara izy ireo. Azonao atao koa ny manandrana manamboatra azy amin'ny moanina, matsiro! Misaotra anao tamin'ny hevitrao sy ny fanarahana anay 🙂
Te-hanao an'ity fomba fahandro ity aho fa raha ampitomboina avo roa heny ny isan'ireo dia hitovy ny fotoana fandrahoana?
Ho tafiditra in-droa avo roa heny amin'ny thermomix tm31 ve aho?
Croutons tongolo gasy tsy misy gluten